Richard Chew, ACF သည် EditFest LA တွင်တစ် ဦး -on-one-one စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditFest LA ကမှာ One-On-One ကို, Conversation အတွက် Featured ရစ်ချတ်ဝါး, ACE အား
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာ့လူကြိုက်များတဲ့ပွဲက၎င်း၏ 10 ပွဲပြုလုပ်th ခုနှစ်
EditFest LA ကအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများအားဖြင့်တင်ပြတည်းဖြတ်ရေး၏အနုပညာနှင့်ယာဉ်၏နေ့-ရှည်လျားသောပွဲကျင်းပ, ဝေါ့ဒစ္စနေးရဲ့ဖရန့်ဝဲလ်ပြဇာတ်ရုံမှာသြဂုတ်လ 12, 2017 အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ EditFest တစ် rapt ပရိသတ်ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာများရှယ်ယာထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများစကားကိုနားထောငျဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, 2008 အတွက် LA ကအတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒီတွင် 10th EditFest LA က, ACE အား၏နှစ်ပတ်လည်နေ့တစ်-on-စကားဝိုင်းတစ်ခု, ရစ်ချတ်ဝါး, ACE အားဆက်သရန်မာနထောင်လွှားဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ် EditFest တဦးတည်း-on-one ပြောဆိုမှုများအန်း V ကို Coates, ACE အားမိုက်ကယ် Tronick, ACE အားအဲရစ် Zumbrunnen, ACE အား, တယ်ရီရောလ်, ACE အားနှင့်အာသာ Schmidt က, ACE အားထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အော်စကာ™အနိုင်ရ ဝါး အဘယ်သူ၏ကျယ်ပြန့်ခရက်ဒစ်များပါဝင်သည်အလွန်ရိုအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည် Star Wars, အန္တရာယ်များစီးပွားရေး, အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးတစ်နှစ်တာ, တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်, Exhale ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ, the Runaways, ရှန်ဟိုင်းမွန်းတည့်, သငျသညျပွုပါသောအရာနှင့် ငါဆမ် Am။ သူဟာဒါရိုက်တာ Emilio Estevez ရဲ့ပေါ်တွင်အလုပ်မှာလောလောဆယ်တွင် အဆိုပါအများပိုင်။ တွဲဖက်အယ်ဒီတာအဖြစ်သူတစ်ဦးအော်စကာများအတွက်အနိုင်ရ Star Warsများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရ တ Cuckoo ရဲ့သိုက်ကျော်ပျံသန်းနှင့်အဘို့အ BAFTA ဆုအနိုင်ရ အဆိုပါ, Conversation နှင့် တ Cuckoo ရဲ့သိုက်ကျော်ပျံသန်း။ သူကသုံး ACE အား Eddie များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
EditFest တက်ရောက်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုနားမထောင်မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးဖန်တီးမှုအခွက်အချို့နှင့်အတူရောနှောဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်း panel ကဆွေးနွေးမှုများအတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအယ်ဒီတာများပါရှိပါတယ်။ 2017 EditFest LA ကတွင်ထည့်သွင်းအယ်ဒီတာများ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ EditFest တက်ရောက်လည်းပါတီပြီးနောက် ACE အားတစ်ဆင်ယင်နေ့လယ်စာနှင့်ဝန်ခံချက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် - ကော့တေးနှင့်မြင်း d'oeuvres, Raffles ဆုနှင့်အတူ။ EditFest LA ကများအတွက်ရရှိသောအဆိုပါ ACE အားပညာရေးစင်တာကိုသွားပါနှင့်အခွန်နှုတ်ယူပြီးသားဖြစ်ကြ၏။
နောက်ထပ်အသေးစိတ်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးသတင်းအချက်အလက်, ခရီးစဉ် americancinemaeditors.com။ လက်မှတ်တွေယခုရောင်းချမှုအပေါ်ပါ၏ အစောပိုင်းငှက်လက်မှတ်တွေဇူလိုင်လ6သည်အထိရရှိနိုင်ပါသည်th.
EditFest ပလက်တီနမ်စပွန်ဆာပံ့ပိုးမှုဖြင့်တင်ပြထားပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း နှင့်ရွှေပံ့ပိုးကူညီ လွန်စွာလိုလားသော.
ACE အား အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများ EditFest ရစ်ချတ်ဝါး တီဗီနည်းပညာ 2017-06-30
ယခင်: StreamGuys In-မူလစာမျက်နှာရေဒီယိုများ၏အနာဂတ် Alexa ကျွမ်းကျင်မှုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူနားထောင်ခြင်းလူငယ်ကဏ္ဍဆီကူညီပေး
နောက်တစ်ခု: InfoComm 2017 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲသုံးခု NewBay အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပြု IHSE ယူအက်စ်အေ